गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यले लगाउने सुनजडित लोगोको मूल्य कति ? | NepalDut
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यले लगाउने सुनजडित लोगोको मूल्य कति ?
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यले लगाउने लोगो आइपुगेको छ । चीनको सांघाईमा बनेको सुन र चाँदीजडित उक्त लोगो गत साउन ७ गते प्रदेशसभा आइपुगेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए ।
चीनमा बनेर आएको नयाँ लोगो चाँदी र सुनले बनेको छ । पहिलेको लोगो प्लास्टिकको थियो । प्लास्टिकको लोगो बनेको वर्ष दिन नपुग्दै खुइलिन थालेपछि यसबारे उनको भनाई छ ।
गण्डकीका माननीयले सुनजडित लोगो लगाउने भनिएको थियो नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सुनजडित होइन, सुनको लेपन मात्र लगाइएको हो ।’ यसअघि सभामुख नेतृत्वको लोगो तथा पोशाक सिफारिस समितिले गत वर्ष भदौ ३० गते गण्डकी प्रदेशको लोगो सार्वजनिक गरेको थियो ।
चीनमा बनेको उक्त लोगो प्रतिगोटा ६ हजार ५ सय रुपैयाँ परेको उनले जानकारी दिए । अहिले भइरहेको लोगो नेपालमै करिब २ सय रुपैयाँमा बनेको उनले सुनाए । नयाँ लोगोमा रहेको दुवैतर्फको धानको बालामा सुनको लेपन लगाइएको उनले बताए ।
गत जेठ २० गते तेस्रोपटक संशोधन गरिएको प्रदेशसभा नियवमालीमा नयाँ अनूसूची थपेर सुन चाँदीजडित लोगो ल्याइएको उनले जानकारी दिए । ‘यो नेपालमा नबन्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘चीनबाट बनेर आएको हो । ७५ लोगो ल्याइएको छ ।’
कुनै सांसदले उक्त लोगो हराएमा प्रदेशसभामा किन्न पाउनेछन् । त्यसरी लोगो किन्दा ६ हजार ५ सय रुपैयाँ परेकोलाई प्रदेशसभा सदस्यले भने ३ हजारमा पाउने छन् । सुन जडित लोगो प्रदेशसभामा सहभागी हुन आउने सांसदलाई प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराइरहेको छ ।
नयाँ लोगो सदस्यहरूले लिइसकेको गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद इन्द्रढाडु विष्टले जानकारी दिए । ‘प्रदेशसभा बैठकमा आउने माननीयज्यूहरूले लोगो लगाइ पनि सकेका छौँ,’ उनले भने, ‘पहिले बनेको लोगो खुइलिने, देख्दा नराम्रो भयो भन्ने सबैको मत भयो अनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले छलफल गरेर नयाँ लोगो बनाउने निर्णय गरेको थियो ।’
अहिलेको लोगो हेर्दा आकर्षक रहेको उनी बताउँछन् । सभामा नआउने केही माननीयले लोगो नलिए पनि अधिकांशले लिइसकेको उनले जानकारी दिए ।